TOP 5 egwuregwu vidio kachasị ere nke 2015 | Akụkọ akụrụngwa
Kwa ụbọchị, anyị bụ nde mmadụ na-anọdụ ala na sofa, n'oge dị iche iche dabere na ọrụ anyị, ịnụ ụtọ ya egwuregwu vidio. Taa na ahịa enwere ọtụtụ narị egwuregwu vidio dị iche iche dị iche iche na nke na-enye anyị ohere ịnwe ezigbo oge na-enweghị ọsụsọ ịgba bọọlụ ma ọ bụ bụrụ ezigbo ohi, na-enweghị ihe egwu itinye oge dị mma na nga.
Nke a 2015 na anyị na-fọrọ nke nta ka nyere anyị oké aha, ma n'ihi na isiokwu a anyị kpebiri na-na 5 egwuregwu vidiyo kacha ere ere afọ a, nke n'ezie nwere ike inyere gị aka nke ukwuu mgbe a bịara n'ịjụ ndị Eze Atọ ahụ maka ihe n'afọ a; Kedu onye na-arịọbeghị maka egwuregwu vidiyo dị egwu maka Ekeresimesi n'agbanyeghị na ọ na-agba isi awọ?
Ọ bụrụ na egwuregwu vidio na-amasị gị jikere n'ihi na anyị ga-amalite nyocha nke ga-amasị gị ma nwee mmasị na ya. Ha bụ egwuregwu vidio nke rụzuru buliekwuo ego na ahia.
1 Efu Kombat X
3 Tanya Nchekwa onwe V
4 Oku ọrụ: Advanced Warfare
Onye ọ bụla nke na-azọrọ na ya maara ihe banyere egwuregwu vidio na consoles ga-ama egwuregwu ahụ Mortal Kombat nke dị n'ahịa karịa afọ 25, ịdị maka ọtụtụ ngwaọrụ ndị dịnụ. Ugbu a na ụdị egwuregwu ya egwuregwu egwuregwu a enwegoro ndị na-eso ụzọ.
Mortal Kombat X doro anya bụ otu n’ime egwuregwu nke afọ a 2015 ma ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ anaghị agha ụgha ma ọ bụ gbanwee ọtụtụ n’etiti ugbu a na njedebe nke afọ ọ ga-abụ otu n’ime egwuregwu 5 kacha mma n’enweghị obi abụọ ọ bụla. Echeghị m na anyị kwesịrị ịkọ ọtụtụ ihe banyere egwuregwu a ma ọ bụ na naanị ịhụ vidiyo / foto na-eche isiokwu a, ọ bụrụ na ịmaghị ihe ị ga-eme na ya ị ga-amaworị.
Ihe fọrọ nke nta ka m nwee ike icheta, anọ m na-anụ ụtọ nsụgharị FIFA dị iche iche kwa afọ. Nke a bụ ikekwe egwuregwu bọọlụ kacha mara amara na nke kacha mma na mbara ụwa, nke jisiri ike meziwanye n'ime afọ iji ghọọ ihe ọ bụ taa, egwuregwu dị egwu nke nwere eserese nke mmadụ niile na-enwe anyaụfụ na nke na-eme anyị obi ụtọ na oge ụfọdụ na-ewute anyị n'ihi na anyị enweghị ike iru ihe mgbaru ọsọ nke akara goolu iji merie mmeri na ọrụ.
Messi, Cristiano Ronaldo, Cesc Fabregas ma ọ bụ Rooney Ha bụ ụfọdụ n'ime ndị ukwu protagonists nke egwuregwu a, ọ bụ ezie na isi agwa doro anya na obi ụtọ. Njikere ịnụ ụtọ bọl kachasị mma site na ịchịkwa ndị ịgba ọsọ kachasị mma n'ụwa?
Tanya Nchekwa onwe V
El Tanya Nchekwa onwe V ma ọ bụ GTA V Ọ bụ nke ọzọ a kacha mara amara video egwuregwu usoro na ahịa na ebe ọ bụ na 1996 Rockstar Games e àjà anyị dị iche iche na nsụgharị nke a na-ewu ewu egwuregwu. Imeziwanye ndịna-emeputa, na-enye akụkọ ọhụrụ ma na-agbakwunye ihe odide dị iche iche, ha jisiri ike bụrụ otu n'ime egwuregwu ndị ahụ nwere ọtụtụ narị puku ndị na-eso ụzọ na-eme egwuregwu ọhụụ ọhụụ na-apụta na saga a iji kpochapụ ahịa.
Ndị ọrụ ya dị mfe na nke ahụ bụ na agbata obi nke obodo furu efu, anyị ga-achọta ndụ iji dịrị ndụ, na obere ego, ọtụtụ chi na izu ohi ma ọ bụ gbaziri ihe niile anyị nwere ike na-enweghị ndị uwe ojii na-achụ nta. Na mgbakwunye, anyị aghaghi imeri, dị ka o kwere mee, ọrụ dị iche iche na-ebilite.
Ọzọ uru nke GTA Ise bụ na ọ dị maka ihe ọ bụla egwuregwu njikwa ma ọ bụ ngwaọrụ i nwere ike iche n'echiche. Mgbe ị chechara ya, naanị ị ga-azụ ya wee bido nụ ụtọ ya.
Oku ọrụ: Advanced Warfare
El Oku ọrụ Ọ bụ ihe ọzọ dị egwu ndị ọzọ na - enweghị ike ịfu na ndepụta a yana aha ọhụrụ nke saga E tinyela Advanced Warfare n'etiti egwuregwu kacha ere ere na 2015 a, ekele maka mmalite ya maka isi egwuregwu egwuregwu na ahịa, Xbox One na PlayStation 4. Dị ka a ga - asị na nke a ezughi, egwuregwu a dị na Steam, maka ndị niile na - ahọrọ kọmputa igwu egwu.
Ngwá agha, agbapụ na atụmatụ iji lanarị bụ nnukwu ebe nkiri nke egwuregwu a na otu afọ ọzọ eguzobewo onwe ya dị ka egwuregwu nke nhọrọ maka ọtụtụ ndị ọrụ na-enwe ọ shootingụ ma na-egbu ndị iro ruo ọtụtụ awa.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ NBA 2K16, Egwuregwu gara aga nke egwuregwu a na-ewu ewu jisiri ike zoo otu afọ ọzọ na ndepụta nke egwuregwu vidio kachasị ere, ekele maka igwu egwu ya na karịsịa ndịna-emeputa ihe ngosi dị egwu ọ na-enye anyị.
Na-ahapụghị sofa ma ọ bụ na-esi n'àkwà bilie, ị nwere ike ịghọ, site na mbọ ụfọdụ, onye kachasị egwu na NBA. Ọ ga-abụrịrị gị ka ị nwee ike ịnụ ụtọ ụdị ndị ọzọ egwuregwu ahụ na-etinye ma tinye onwe gị na njikwa nke otu egwuregwu, mepụta usoro ndị eze gị ma ọ bụ zụọ ọnụ na ndị ọzọ egwuregwu dị egwu na ụlọ ikpe obodo.
Ndị a bụ egwuregwu 5 kachasị ere ahịa na afọ 2015, ọ bụ ezie na ikekwe site na njedebe nke afọ anyị nwere ike ịhụ ụfọdụ mgbanwe kemgbe mkpọsa Krismas bụ oge dị mkpa n'ahịa a na nke ahịa rịrị elu.
Enjoyed nweela egwuregwu ndị mejupụtara ndepụta a?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Videogames » TOP 5 egwuregwu vidio kachasị ere nke 2015